Fabio Capello oo saadaaliyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan – Gool FM
Fabio Capello oo saadaaliyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan
(Spain) 13 Feb 2020. Tababaraha reer talyaani ee Fabio Capello ayaa saadaaliyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka La Liga ee dalka Spain xilli ciyaareedkan.
Fabio Capello ayaa aaminsan in Real Madrid ay tahay kooxda ugu cad cad ee loo caleemo saari karo horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan, isagoo carabka ku adkeeyay in Barcelona ay heysato dhibaato aad u weyn.
Capello oo arrintan ka hadlayay ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay loolanka horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan wuxuuna yiri:
“Ma fahmin dhibaatada Ernesto Valverde iyo dhibaatada Lionel Messi waa in la xaliyaa kahor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka”.
“Waa waxyaabo aad muhiim u ah qolalka dher badelashada waana in la xaliyaa, laakiin hadda tani waxay noqotey mid aad u adag, sababtoo ah waqti yar ayaa haray”.
Intaas kaddib Fabio Capello ayaa wuxuu iftiimiyay in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay horumar sameysay isla markaana ay leedahay niyad kooxeed.
“Real Madrid waa koox dhib badan oo ciyaareysa, waxaa laga yaabaa inaysan lahayn tayo la mid ah tii ay horay u heysatay, balse waxay leedahay go’aano badan”.
Dhinaca kale Fabio Capello ayaa wuxuu si weyn u ammaanay macalinkii hore kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich, haatana maamula Man City ee Pep Guardiola, isagoo cadeeyay inuu gabi ahaanba bedelay kubadda cagta adduunka.